SP-L05 SOICARE 500ml Ultrasonic Humidifier Aromatherapy Saliida Aasaasiga ah Diffuser, Shiinaha SP-L05 SOICARE 500ml Ultrasonic Humidifier Aromatherapy Saliida urka Muhiimka ah Soosaarayaasha Shirkadaha, Shirkadaha, Warshadaha - Sunpai Industries Limited
SP-L05 SOICARE 500ml Ultrasonic Humidifier udugga Saliida udgoon udgoonka udgoonka
500ml Xiinka Humidifier udugga Saliida udgoonka udgoonka faafa
21 * * 21 25cm
· QALABKA AROMATHERAPY: Qalabkan faafa ee saliida lagama maarmaanka u ah ultrasonic waa qalab udgoon badan oo fara badan oo ka duwan wixii kale ee aad waligaa isticmaashay. Waxay ka kooban tahay mid weyn oo sahlan in la nadiifiyo taangiga weyn ee 500ml, 7 midab oo kala duwan oo nalka loo yaqaan 'LED light', noocyo badan oo nebulizer ceeryaamo ah, iyo sidoo kale qalab otomaatig ah oo amniga ka ilaaliya kuleylka haddiiba ay biyo yareeyaan.
· Awood Ballaaran oo si Weyn AYU U HORUMARIYAA TAYADA CARRUURTA: Awood u leh 500 mililitir, tani aad ayey ugu fiican tahay qolalka waaweyn waqtiga shaqadana waa ilaa 16 saacadood U adeegso si aad u wanaajiso tayada hawada iyo jawiga gurigaaga, u dabool urta xayawaanka ama sigaar cabista, iyo inaad qoyskaaga ka ilaaliso hawo xad dhaaf ah oo qalalan, sheybaarayaasha, xasaasiyadda iyo waxyaabo kale oo badan!
· WAXYAABAHA TAYADA BPA-BILAASHKA AH: Marka ay timaaddo waxyaabaha ugu muhiimsan ee saliidaha faafiyeyaasha ah, waxaan ka dhignaa hal dhibic oo aan isticmaalno laakiin isku heer sare ah, ammaan ah, iyo jawi saaxiibtinimo leh PP dhalooyinka carruurta ayaa laga sameeyaa, iyo sidoo kale gobolka hababka wax soo saarka farshaxanka iyo xakamaynta tayada adag.
· AQOON YAR AQOON U LEH QOF KASTA: Haddii aad suuqa ugu jirto hadiyad fiican oo wax ku ool ah, waad iska joojin kartaa fiirinta. Tani udugga weyn diffuser saliidaha lagama maarmaanka ah waa hadiyad fikir iyo anfacaya, mid ka mid ah in qof walba ka faa'iideysan karaan. Iyada oo isku dhafan qaab, naqshad iyo shaqo sida oo kale ah, waa mid tayo leh oo la hubo
aromatherapy daaweynta saliidaha diffaaca jirka
adabtarada, koob qiyaasta
Nalka Habeenka Jilicsan & Diiran / Midabka Hoggaaminaya
SP-L09 SOICARE 300ml hadhuudh 7 Led Lights saliid udgoon saliid lagama maarmaan diffuser ultrasonic